ထရိန္နင္အလုပ္သင္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း 研修（けんしゅう）センター (၁) | Working Friends
ထရိန္နင္အလုပ္သင္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္း 研修（けんしゅう）センター (၁)
2018年4月18日 2018年4月18日 MJ
ထရိန်နင်အလုပ်သင်နှင့် သင်တန်းကျောင်း 研修（けんしゅう）センター (၁)
【Unicode】⇒ Zawgyi Font ျဖင့္ ဖတ္ရန္(စာေပၚႏွိပ္ပါ)
🎵 ထရိန်နင် အလုပ်သင်များ အတွက် ခြေလှမ်း တစ်အစ။
ထရိန်နင်အလုပ်သင်နဲ့ ပါတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားသူ စာဖတ် ပရိသတ်များအတွက် အမ MJ ခြေလှမ်းတစ်က စ ရေးပြမိနေပါတယ်။ အမ MJ ရဲ့ ထရိန်နင်သင်တန်းသား အတွက်ရဲ့ စာကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်ခြေလှမ်းက စ လှမ်းရမယ် ဆိုတာကို နောကျေစွာ သိပါလိမ့်မယ်။
ခုဆို ခြေလှမ်းစလှမ်းပုံလေး ရေးပြမိတာ စိတ်ကူးထဲ ဂျပန်ကိုတောင် ခြေတလှမ်း စ ဝင် နေပြီပေါ့နော့။ ရှေ့အပိုင်းတွေလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကဲ့ ဒီတော့ အရင် ရေးလက်စလေး ဆက်ရေးပါရစေပေါ့။အရင် တစ်ပိုင်းက ထရိန်နင်အလုပ်သင် ဂျပန်စရောက်တဲ့အခါ ပထမ တစ်လမှာ သင်တန်းကျောင်း သွားရတယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
🎵 ထရိန်နင်ဂျပန် သင်တန်းကျောင်း ဆိုတာ ဘာလဲ???
အရင် ရေးထားတဲ့ နေရာမှာ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင်ဖြင့် လာစဉ် တရက်မြောက် အကြောင်း။
✨🌸ပထမဦးဆုံး ရက်မှာ အလုပ်လိပ်စာထံသို့ တိုက်ရိုက်သွား အလုပ်စဆင်းရတာ မဟုတ်ဘဲ ကင်းရူးစင်တာလို့ ခေါ်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းကို ပို့ပေးတာပါ။
အဲ့ဒီ့မှာ တစ်လ နေရပြီး၊ တစ်လပြည့်ရင် အလုပ်ဌာနက ပြန်လာခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ့တော့မှ အလုပ်လိပ်စာ ရှိရာသို့ ရောက်ရတာပါ။
ဒီတော့ ကင်းရူးစင်တာရဲ့ အကြောင်း နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် မြန်မာပြည်က ဖောင်ကြီးသင်တန်းကျောင်းလိုပေါ့ကွယ်။ အလုပ်မဝင်ခင် လေ့ကျင့်ပေးတာပေါ့။
🎵 နိုင်ငံ အသီးသီးမှ ထရိန်နင် သင်တန်းသားများ
🌸 သင်တန်းကျောင်းကတော့ နေရာဒေသ အနှံ့အပြားမှာ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းပုံစံ အဆောက်အဦး မဟုတ်ဘဲ အိမ်/ တိုက်ခန်း ပုံစံ နေအိမ်ပါပဲ။ ဂျပန်ဖျာ ၆ ချပ်စာ ရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ ၂,၃ ယောက် အဆောင်သဘောမျိုးနဲ့ နေအိပ်ရပါတယ်။
🌸အလုပ်ဝင်တဲ့ အခါ နံနက် ၇:၀၀ နာရီမှ စ ဝင်ရတာလည်း ရှိတော့ အလုပ်အတွက် ထချိန် အလေ့အကျင့် ရစေရန် သင်တန်းကျောင်းမှာ နံနက် ၆:၀၀, ၆:၃၀ ဆို အိပ်ရာ ထ ရ ပြီပေါ့ကွယ်။ ဒီလိုနဲ့ အိပ်ယာ နိုးပြီဖြစ်ကြောင်း အခန်တိုင်းရှေ့မှာ အမှတ်စဉ် အော်ရပါတယ်။ ပြီး တနေ့တာ အစီအစဉ် စ ကြ တာပါ။
🌸အဲ့ဒီ့ သင်တန်းကျောင်းမှာ ဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်းစုံ၊လူမျိုးစုံ တွေ့ရမှာပါ။
နိုင်ငံတွေကတော့ ရုရှား၊ တရုတ်၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ် ၊ဖိလစ်ပိုင် ၊ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ သီရိလင်္ကာ စတဲ့ နိုင်ငံတွေ ပါတယ်ပေါ့။
🎵 ကင်းရူးစင်တာ ထဲမှာ ဥပဒေ နဲ့ ပါတ်သက်တာတွေကို ဘယ်လိုသင်ပါလဲ ?
အနည်းငယ် ကြိုတင်လေ့လာကြည့် ရအောင်ပါ။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ဥပဒေ အသီးသီး ရှိတယ်ပေါ့နော့။ ဥပဒေ မလိုက်နာရင် အဖမ်းခံရ ဒါဏ်ငွေဆောင်ရ စတဲ့ အမူ့ကိစ္စတွေ အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရသလို။ ဂျပန်နိုင်ငံ ရောက်လာတဲ့ အခါမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကို သေချာ လိုက်နာဖို့ လိုအပ်တာပါဘဲ။
🌸 ပြစ်မှုကြီး၊ပြစ်မှုငယ်မျိုးစုံ ပြစ်မှုမဖြစ်အောင် အသိပေးပါတယ်။
ဥပမာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ပစ္စည်းအား ငွေပေးချေ မဝယ်ခြင်း မှ အစ။ အချင်းချင်း ကိုယ်ထိ လက်ပါ ရန်ဖြစ်ခြင်း အဆုံး အများကြီးပေါ့။
ဒီလို တွေ့ကြုံလို့ ဂျပန်ရဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရ၊ ကိုယ့်ဘဝ မင်နီ တားခံရ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ၊နောက်နှစ် သက်တန်းတိုး တဲ့အခါ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တာပေါ့။
ဒါကြောင့် ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။ အမတို့တွေဟာ နိုင်ငံကြီးသား ပီသအောင် ပြုမှုပါလို့။
🌸အလွယ်တကူ သိပါလျက်နဲ့ တကယ်တမ်း မလိုက်နာတဲ့ အခါ ဘယ်လောက်ထိ ဘယ်လို ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာ ပိုမို လေးနက်စွာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
စက်ရုံ ပစ္စည်းကို အလုပ်ပြီးချိန် ဒီနား သိမ်းပါဆိုလျှင်… တခြားနေရာ အလွယ် ထားခဲ့မိလိုက်ပါက…
နောက်နေ့ အလုပ်ဆင်းသူမှာ ထိုပစ္စည်း ရှာမတွေ့၍ စက်ရုံ စက်/ မော်တာ လည်ပတ်ရန် အချိန်နောက်ကျသော် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် အင်အား လျော့ကျသွားခြင်း။ ငွေနှင့် တိုင်းဆပါက မည်မျှ အနုပ်ငွေ ပမာဏ ဖြစ်သွားခြင်း။
စသဖြင့် သိထားသော်လည်း သတိမထား၊ အမှတ်တမဲ့ ဒီလောက်လေးများ ဒါလေးများ ဆိုတာတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ လေးနက်တယ် ဆိုတာတွေ သင်ပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ ရပ်ခွင့်ပေးပါနော်။
Previous Previous post: ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ သင္ယူေျဖဆိုနိုင္ေသာ (Certificate) လက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း(၂)
Next Next post: ဂ်ပန္နိဳင္ငံတြင္ သင္ယူေျဖဆိုနိဳင္ေသာ (Certificate) လက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း(၃)